Uchwepheshe we-Semalt uchaza izinzuzo ezibalulekile zokuqashisa isikhungo se-SEO yebhizinisi lakho le-inthanethi
Esikhathini sokukhula okusheshayo kwe-digital, iphesenti yokuthengiswa kwe-intanethi ikhula ngokuya,okuholela emncintiswaneni omkhulu. Lezo zinkampani zithola umncintiswano, ophumelele ngempumeleloufike phezulu emiphumeleni yosesho futhi, ngenxa yalokho, wafinyelela abathengi abangabaningi. Iuchwepheshe ohola we-Semalt Amasevisi Wezinhlelo Zedivayisi, inkampani ngokukhethekile kumaThuluzi we-SEOukukhuthazwa kwewebhusayithi, uJulia Vashneva, uchaza ukuthi yimiphi imiphumela i-professional SEO eqinile esiza ibhizinisi lakho ukuba lifeze - bearing temperature controller.
Izindawo eziphezulu eziphezulu ku-Google
Okokuqala, okuqukethwe okubhalela iwebhusayithi yakho kubalulekile ezindabeni zokuseshainjini ye-injini, ingasaphathwa ngenhloso yokwehlisa izilaleli zakho ezibhekiswe kuzo ukuthenga kwakhoumkhiqizo noma isevisi. Ukuthuthukisa okuqukethwe okunjalo kudinga indlela yobuchwepheshe kokubiliukubhala kanye ne-SEO ochwepheshe, abakha okuqukethwe kwakho kuwebhusayithi ngendlela ephelele. Okwesibili,kubalulekile ukugcina ulwazi kwiwebsite yakho ngokuvuselelayo, futhi nakhokuthonya injini yakho yokusesha. Ekugcineni, okuqukethwe, oklanyelwe ukuhlinzekaizixazululo ezinkingeni noma izimpendulo zemibuzo, izothola izinga eliphezulu lobuqotho beklayenti.Lapho zonke lezi zeluleko zibonakala zilula ukusebenzisa ngokusebenza, iqiniso libonisa ukuthi okuningizezinkampani zikhiqiza okuqukethwe okungalungile okungabonakali, okubangela ukuthi amawebhusayithi abo aphansi asebenze futhi amaklayenti aphumele.
Isizukulwane seTraffic esiphumelelayo
Izixhumanisi eziphumayo yizo ezivela kusayithi lakho futhi ziqondise izivakashi kwezinyeizizinda ngenkathi izixhumanisi ezibonakalayo yizo ezivela kwamanye amasayithi kanye nomgwaqo oholayokuwe. Ukwakhiwa kwesixhumanisi kungenye yezinsika zomkhiqizo ophumelelayo. Nokho,kuyinkemba enezinhlangothi ezimbili futhi. Ukukhetha izindawo ezingalungile, ezizobhekisela kwisizinda sakho,kuzoba nomthelela omubi kokubili isimo nesithunzi seplatifomu yakho yewebhu. Eningikumawebhusayithi ethu amaklayenti, okuyinto Semalt ehlaziywe, sabona le nkinga. Ngokushesha nje lapho ithrafikhiisizukulwane sithatha ezinye izici ezihlangene, indlela eyinkimbinkimbi yokusebenza kuyo yonke intobaqinisekisa ukuthi ngeke uphonse noma iyiphi imininingwane ebalulekile.
Ukuqapha ukusebenza kwe-inthanethi
Akusho ukuthi ukulandelela ukusebenza kwesayithi lakho kuyimfuneko yokusebenza ngempumeleloibhizinisi online. Esikhathini esingenakuqhathaniswa kwemakethe, izici eziningi zithonya ibhizinisi lakho njalousuku. Ukuzivumelanisa nezimo ezishintshashintshayo kukunikeza izinzuzo ezingenakuphikisana zokuncintisana. Kukhonainani elikhulu lezici ezingase zibe nomthelela esizukulwaneni somgwaqo, simo, kanye namakhasimendeukwethembeka. Kusukela kumkhankaso wokukhangisa we-virus wezincintisana zakho eziphambili amaphutha akhookuqukethwe, kungaba yilokho okulimaza ukusebenza kwakho futhi kufanele kutholakale okuncane kakhuluisikhathi kungenzeka. I-SEO Agency esebenzayo isebenze ngomunwe ku-pulse yewebhusayithi yakhoukusebenza, okwenza umthelela omkhulu ekuthuthukiseni ibhizinisi lakho.